နောက်ထပ်တစ်နှစ် AVAST အခမဲ့အဘို့တိုးချဲ့ဖို့ကိုဘယ်လို - AVAST - 2019
ကွန်ပျူတာ hard drive ကို, ကျယ်ဝန်သော flash drive ကို, မှတ်ဉာဏ်ကတ်များနှင့်အခြား gadgets - နည်းပညာ၏အသက်အရွယ်ခုနှစ်တွင်လုံးဝနီးပါးစက္ကူ form မှာဓါတ်ပုံတွေကိုသိမ်းဆည်းဖို့လိုအပ်ကြောင်းဖျက်သိမ်းပါကဒီရည်ရွယ်ချက်အတွက်အထူးသိုလှောင်ရေးကိရိယာများအတွက်သုံးစွဲဖို့ ပို. အဆင်ပြေပါသည်။ ခေတ်သစ်ကိရိယာများ၏ဒုက္ခသူတို့နှင့်အတူအဖြစ်အလွယ်တကူသတင်းအချက်အလက်ဖျက်ပစ်နိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သို့သော်ဤအခြေအနေ၌သင် software ကို Wondershare ဓာတ်ပုံ Recovery ကိုရရှိပါလိမ့်မယ်။
ဒါဟာပရော်ဖက်ရှင်နယ် tool ကိုအထူးအမျိုးမျိုးသောသိုလှောင်ရေးကိရိယာထဲကနေပယ်ဖျက်ခဲ့တဲ့ဓါတ်ပုံကိုပြန်လည်ဖေါ်ထုတ်ရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ တဖန်သင်တို့ပုံရိပ်တွေကိုဖျက်ပစ်ရှိမရှိနေပါစေ, အ disc ကို format နဲ့ရှုံးနိမ့်ခဲ့ကြကြုံတွေ့သို့မဟုတ်ဓာတ်ပုံများကိုအတွက်ရလဒ်တစ်ခုပျက်ကျမှု, ဖြစ်ပွားလျက်ရှိနေသည် - ဆိုအမှု၌, ထို program အရေးကြီးတဲ့ဖိုင်တွေကိုရှာဖွေ restore လုပ်လို့ရပါတယ်။
တစ်ခုပေါ်က partition သို့မဟုတ် device ကိုရွေးချ
သင်တစ်ဦး flash drive ကိုသို့မဟုတ်မှတ်ဉာဏ်ကဒ်ထဲကနေပယ်ဖျက်ခဲ့တဲ့ဓါတ်ပုံ restore လျှင် - ပဲချက်ချင်းအစီအစဉ်စတင်ပြီးနောက်စာရင်းထဲက device ကိုရွေးချယ်ပါ။ လျှင်ရုပ်ပုံများကိုခေါင်းစဉ်ကို select, ကွန်ပျူတာကနေဖျက်ပစ်ခဲ့ကြခြင်း, အရာများအတွက်စကင်ကိုလုပ်ဆောင်ပါလိမ့်မည်။
Wondershare ဓာတ်ပုံ Recovery ကိုအလုပ်ရိုးရှင်း, သင် image ကိုကို formats ရှာနေကြပါသည်မှုအရာကိုမသိဘဲ - သာသင်တွေ့ချင်သောဖိုင် Format အကြောင်းကိုပုံးကိုစစ်ဆေးပါ။ သငျသညျတစ်ခုလုံးကို Drive နှင့်တစ်ဦးချင်းစီကဏ္ဍများ scan ချင်ကြဘူးလျှင်အပြင်, သငျသညျအဘယျသို့နှင့်ကိုရှာဖွေပါလိမ့်မည်အရာကိုထံမှသတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။
တခြားအလားတူအစီအစဉ်များကိုအကောင်အထည်ဖော်အဖြစ် Wondershare ဓာတ်ပုံ Recovery ကို, အစကင် mode ကို select လုပ်မထားဘူး - သူကတဦးတည်းဖြစ်၏။ ဒါဟာဤကိစ္စတွင်အတွက်ချောင်းကို scan ဖတ်ခြင်းဖြစ်စဉ်တခုမိနစ်ထက်လျော့နည်းယူသည်ဟုထုတ်ပြန်ချက်တွင်ဖော်ပြထားသည်တန်ဖိုးရှိဖြစ်တယ်, ရလဒ်အဖြစ်အပေါငျးတို့သပုံရိပ်တွေကျွန်တော်ရှာနေခဲ့ကြသည်တွေ့ပါပြီ။
ရုပ်ပုံများ, ဗီဒီယိုများနှင့်ဂီတတို့ပါဝင်သည်သမျှသောဖိုင်များကိုပြတင်းပေါက်၏လက်ဝဲ pane ထဲကကိုဖိုင်အမျိုးအစားအားဖြင့်ခွဲခြားပေးသည်။ Program ကိုသငျသညျမလိုအပ်ပါဘူးဖိုင်တွေကိုတွေ့ပါက, ရုံသူတို့ထံမှကို tick ကိုဖယ်ရှား, အဲဒီနောက်ခလုတ်ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့် restore လုပ်ငန်းစဉ်ကိုအပြီးသတ် "Recover".
သင် program နဲ့သင့်ရဲ့အလုပ်ကြားဖြတ်ဖို့လိုအပ်ခဲ့လျှင်, သင်က run နောက်တစ်ကြိမ်အလွန်ရှေ့ဦးစွာ မှစ. တစ်ခုလုံးကိုလုပ်ငန်းစဉ်မှတဆင့်ရှာဖွေရန်မလိုပါ - သငျရုံ res နှင့်အတူဖိုင်တစ်ဖိုင်တင်ပို့ခြင်းကိုခံရလတံ့သောသင်၏ကွန်ပျူတာစကင်သတင်းအချက်အလက်မှကယ်လွှတ်တော်မူ၏။
ပင်အတွေ့အကြုံမရှိသေးသောအတွက်အခက်အခဲများရှိသည်မဟုတ်လိမ့်မည်ဟုရိုးရှင်းသော interface ကို;
formats အမျိုးမျိုးနဲ့ပုံများ, ဒါပေမယ့်လည်းအသံသို့မဟုတ်ဗီဒီယိုဖိုင်တွေကိုသာရှာဖွေနိုင်စွမ်း;
သငျသညျပယ်ဖျက်ခဲ့တဲ့မသာအစာရှောင်ခြင်း၏တာဝန်နှင့်အတူရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်လိမ့်မည်ဟုဓာတ်ပုံများ, ဒါပေမယ့်လည်းသှေး recover လုပ်ဖို့ရိုးရှင်းတဲ့ tool ကိုရှာလျှင်, Wondershare ဓာတ်ပုံ Recovery ကိုစမ်းပါ။ အခမဲ့ဗားရှင်းအပြည့်အဝက၎င်း၏ထိရောက်မှုသေချာပါလိမ့်မယ်။
Wondershare ဓာတ်ပုံ Recovery ကိုအစမ်းဗားရှင်းကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်
Hetman ဓာတ်ပုံ Recovery ကို မှော်ဓာတ်ပုံ Recovery ကို Starus ဓာတ်ပုံ Recovery ကို RS ဓာတ်ပုံ Recovery ကို
Wondershare ဓာတ်ပုံ Recovery ကို - မြင့်မားသောအမြန်နှုန်းနှင့်စစ်ဆင်ရေးလွယ်ကူခြင်းအားဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာသောပယ်ဖျက်ခဲ့တဲ့ဓာတ်ပုံများ, recover လုပ်ဖို့ program တစ်ခု။
ရေးသားသူ: Wondershare Software များ